इसाबेल एलेन्डेको सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू, एक चयन सूची | वर्तमान साहित्य
इसाबेल एलेन्डे द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
जुआन अर्टिज | | लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला, धेरै
इसाबेल एलेन्डेले उद्धृत
यदि एक इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताले खोजी "इसाबेल एलेन्डे सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू" अनुरोध गर्दछ भने, परिणामहरू विगत चार दशकहरूको धेरै बेच्ने शीर्षकहरूको सूचीत गर्दछ। उनको प्रभावकारी सबैभन्दा धेरै बिक्रि हुने व्यक्तित्वहरूको बाबजुद पनि, साहित्यिक आलोचनाको एक राम्रो क्षेत्रले यस चिली-अमेरिकी लेखकको कामलाई हेरेको छ। सबैभन्दा कठोर आवाजले उनलाई गेब्रियल गार्सिया मार्क्जेजको मात्र प्रतिलिपि भएको आरोप लगायो।
यद्यपि एलेन्डेले पनि कोलम्बियाली प्रतिभाको प्रभावलाई मान्यता दिइसकेका छन्, उदाहरणका लागि केही प्रसिद्ध लेखकहरू - रोबर्टो बोलासोले उनलाई “साधारण लेखक” भनेका छन्। जे भए पनि, विचार व्यक्तिपरक छन्; नम्बरहरू, होईन। ठीक छ, उनको million२ मिलियन प्रतिहरू बिक्रि भयो (languages२ भाषाहरूमा अनुवाद गरियो) उनले विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा व्यापक रूपमा पढ्ने जीवित स्पेनिस भाषा लेखकको रूपमा राख्छिन्।
ईसाबेल एé्ग्लिका एलेन्डे लोलोनाको जीवन, केहि शब्दहरूमा
चिलीका अमेरिकी नागरिक इसाबेल एलेन्डेको जन्म २ अगस्त, १21942२ मा पेरूको लिमामा भएको थियो। उनका बुबा साल्भाडोर एलेन्डेका पहिलो चचेरे भाई थिए (१ 1970 and० र १ 1973 betweenXNUMX बीचमा चिलीका राष्ट्रपति, उनलाई पिनोचेटले हटाए सम्म)। भविष्यका लेखकले बोलिभियाको ला पाजमा रहेको एक अमेरिकी एकेडेमीमा प्राथमिक विद्यालयको अध्ययन गरे। पछि, म बेरूत, लेबनानको एउटा निजी अंग्रेजी संस्थानमा पढ्छु।
१ 50 s० को दशकको अन्तदेखि पिनोचेत तानाशाहीको स्थापना (१ 1973 20) सम्म एलेन्डे चिलीमा आफ्नो पहिलो पति मिगेल फ्रियाससँग बस्थे। जससँग उनी २० बर्ष भन्दा बढी समयको लागि विवाह गरी र उनका दुई बच्चा थिएः पाउला (१ 1963 --1992 - १ 1963 XNUMX २) र निकोलस (१ XNUMX XNUMX)। पछि उनी भेनेजुएलामा १ 1988 .XNUMX सम्म निर्वासनमा परेकी थिइन्, जुन साल उनले संयुक्त राज्यमा विली गोर्डनसँग विवाह गरे।
इसाबेल अलेन्डेले चिली, भेनेजुएला र युरोपमा महत्वपूर्ण साहित्यिक संगठनहरू र संचार माध्यमहरूमा काम गरेका थिए। दक्षिणी देशमा उनले १ 1959 of-- between बीच संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य र कृषि संगठनमा काम गरे।
त्यस्तै, उनले पत्रिकाहरूमा काम गरे पाउला y मम्पाटो; साथै, चिली टेलिभिजन च्यानलहरूको एक जोडीमा। पछि उनी अखबारको सम्पादक थिइन El Nacional र काराकसमा उच्च विद्यालयमा शिक्षक। उनका पहिलो प्रकाशित पुस्तकहरू बच्चाहरूलाई लक्षित थियो, हजुरआमा पञ्चिता y Lauchas, lauchones, चूहों र चूहों, दुबै 1974 बाट।
आत्माहरूको घर (1982)
पहिलो उपन्यास, पहिलो अत्यधिक बिक्री भएको - यो कुनै पनि लेखकको सुनौलो सपना हो-, इसाबेल एलेन्डेले यसलाई प्राप्त गरे आत्माहरूको घर. यस्तो सम्पादकीय प्रभाव ठूलो अंशमा यसको सम्बन्धी कथनको तत्वहरूको साथ लोड भएको कारणले हुन्छ जादुई यथार्थवाद एक चिली परिवार को चार पुस्ता। त्यसकारण समानता जुन केहि आलोचकहरूले संदर्भमा औंल्याए एक सय वर्ष निष्ठा.
तसर्थ, विकासमा प्रेम, मृत्यु, राजनीतिक आदर्शहरू र अलौकिक मुद्दाहरू (भूत, उपदेश, टेलिकिनेसिस ...) सम्बन्धी विषयहरूका लागि ठाउँ छ। एउटै समयमा, पुस्तकले २० the औं शताब्दीमा चिलीमा घटेका केही महत्त्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक र धार्मिक परिवर्तनहरू झल्काउँछ।
आत्माहरूको घर ...
यस उपन्यासका लागि केहि पुरस्कारहरू प्राप्त भयो
वर्षको उपन्यास (चिली, १ 1983 XNUMX)
वर्षका लेखक (जर्मनी, १ 1984 XNUMX XNUMX)
वर्षको पुस्तक (जर्मनी, १ 1984) XNUMX)
ग्रान्ड प्रिक्स डी 'अवसर (फ्रान्स, १ 1984) XNUMX)
इवा लुनाको कथा (1989)
भूखंड र सन्दर्भ
साहित्यलाई समर्पित पोर्टलमा उनीहरूले उपन्यास पढ्न सिफारिस गर्छन् इवा लुना (१ 1987 23) यस काल्पनिक लेखक द्वारा हस्ताक्षरित २ stories कथाहरूको यस पुस्तकको अन्वेषण गर्नु अघि। यी कथाहरूको धेरै धेरै नाटकीय, रेडियो र टेलिभिजन अनुकूलनहरू थिए। त्यस्तै गरी, ती मध्ये धेरैमा जादुई यथार्थवादका लक्षणहरू अवलोकन गरिएका छन्, त्यस्तै स्थिति तल उल्लेख गरिएको छः
"मरियम मूर्ख मूर्ख"
"एक बुद्धिमान चमत्कार"
उस्तै तरिकामा, रोल्फ कार्लि - नायक इवा लुना- अन्तिम कथामा देखा पर्दछ, माटोको हामी बनेका छौं, जसको विकास ओमारा सान्चेजको वास्तविक केसबाट प्रेरित छ। अर्कोतर्फ, कठिनाइ र षडयन्त्रको सामना गर्नुपर्दा महिलाहरूको प्रेम र शक्ति, सबै कथाहरूको परिचालन थ्रेडलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यस्तै बदला लिने प्लाट्सलाई अलग राख्न सकिदैन।
ईवा लुना को कथा ...
कथाहरूको सूची पूरा भयो इवा लुनाको कथा
"बोका दे सापो"
"टोमस वर्गासको सुन"
"यदि तपाईंले मेरो मुटु छुनुभयो"
"प्रेमिकाका लागि उपहार"
"उत्तरतर्फ जाने बाटो"
"उचित सम्मानका साथ"
"प्रेम पत्र धोका दिए"
प्रस and्ग र तर्क
यो एक आत्मकथाको उपन्यास हो, इजाबेल एलेन्डेकी छोरी पाउला फ्रिस एलेन्डेको बिरामीबाट प्रेरित। उक्त पुस्तकको शुरुवात एपिसोलेटरी स्पीच (लेखकबाट उनको छोरीलाई लेखेको पत्र) बाट भयो जब पाउला कोमामा खसेपछि उनलाई म्याड्रिडको क्लिनिकमा भर्ना गरियो। यस खण्डमा, आमा आफ्ना आमाबुबा र हजुरबा हजुरआमाको जीवन सम्झनुहुन्छ।
साथै, एलेन्डेले आफ्नो बाल्यावस्था र किशोरावस्थाका केही किस्सेहरू, दुवै व्यक्तिगत र अन्य आफन्तहरूको संकेत गरे। पाठ प्रगति हुँदै जाँदा, आमा निराश देखि राजीनामा गर्न जान्छ ... बिस्तारै उनी स्वीकार्छन् कि उनकी छोरीले त्यो झूट बोकेको शरीरमा पक्कै रोकिदियो।
भाग्य को छोरी (1999)
यो पुस्तक एक ऐतिहासिक कथा उपन्यास हो जुन १० बर्ष सम्म फैलिएको छ (१ 10 - १ans1843) र यसले चरित्रलाई वलपरोसोबाट क्यालिफोर्निया सम्म पुर्‍याउँछ। यो सबै विशिष्ट तत्वहरूका साथ एक कथा हो सबै भन्दा राम्रो विक्रेताहरू Allende को। त्यो हो, रोमान्स, पारिवारिक रहस्य, कडा र निर्धारित महिला, महाकाव्य परिदृश्य, अलौकिक उपस्थिति र यसको मुख्य पात्रहरूको क्षतिपूर्ति।
यो चिलीमा हुन्छ (१1843 - १1848)। यो खण्डले एलिजालाई कसरी देखाउँदछ - यो खेलको मुख्य चरित्र— सोमर्स परिवारले अपनाएको थियो र माथिल्लो वर्गको वातावरणमा कसरी हुर्काएको थियो।। त्यस्तै सोमर भाइहरूको व्यक्तित्व (जेरेमी, जोन र रोज) वर्णन गरिएको छ। ती मध्ये मिस मिस सबैभन्दा मायालु र एलिजाको नजिक थिइन्।
अर्को महत्त्वपूर्ण चरित्र मामा फ्रेसिया थियो, जो मापुचे आदिवासी थिए जसले एलिजालाई धेरै पाक कला दिए। अब, एक जसले केटीको ब्रह्माण्डलाई साँच्चिकै रूपान्तरण गर्नुभयो जोक्वान एन्डिया, एक सुन्दर युवा जसले जेरेमी सोमर्सका लागि काम गरे। केटाले एलिजाको मुटु जित्यो र उनको प्रेमी भयो।
यो १1848 र १1849 XNUMX बीचमा हुन्छ। यो जोकान एन्डिएटाको क्यालिफोर्निया प्रस्थानको साथ सुनको भीडको बीचमा भाग्य प्रयास गर्न सुरु हुन्छ। चाँडै नै, एलिजाले उनी गर्भवती भएको थाहा पाए र डच जहाजमा उनको पछि लाग्ने निर्णय गरे। त्यस जहाजमा एलिजाले कुक, ताओ चीनसँग घनिष्ठ मित्रता गाँसे र उनको गर्भपतन भएपछि उनलाई लुकाउन र मद्दत गरे।
क्यालिफोर्निया आइपुगेपछि ताओले एक्यूपंक्चर अभ्यास स्थापना गर्‍यो र चाँडै उनले आफ्नो प्रियजनको खोजी गर्न थालिन्। यसैबीच, चिलीमा, सोमर्स एलिजाको हराएको देखेर स्तब्ध भए। विशेष गरी मिस रोज पछि: एलिजा जोन र एक चिली महिला (अज्ञात पहिचानको) बीचको सम्बन्धको फल थियो।
एलिजा थोरै विचलित भइन् जब उनीले थाहा पाइन कि डाकू जोआकान मुरिटाको शारीरिक वर्णन उनको प्रेमीको जस्तै मिल्दोजुल्दो छ। पछि, एलिजा पत्रकार याकूब फ्री फ्रीन्टको सम्पर्कमा आए। ऊ उसलाई सहयोग गर्न असमर्थ थियो, तर उसले सोमर परिवारलाई एलिजामा सतर्क गरायो (उनीहरूले सोचे कि उनी बितिसकेकी छन्)।
यस बीच, एलिजा र ताओ सान फ्रान्सिस्कोमा बसोबास गरे। त्यो शहरमा उनले चिनियाँ वेश्याहरुलाई आफ्नो पेशाबाट टाढा आफ्नो जीवन पुनःनिर्माण गर्न सहयोग गर्न आफूलाई समर्पित गरे। समय बित्दै जाँदा, यी दुई बीचको बन्धन रोमान्टिक भयो। अन्तमा, जोआक्वान मुरिआटा कैद गरी मारिए। त्यसोभए, जब एलिजा अन्ततः गल्ती गर्नेको पहिचान प्रमाणित गर्न सक्षम भएकी थिइन्, उनी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भइन्।
भाग्य को छोरी: १168/7 ...
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » इसाबेल एलेन्डे द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
मेगन म्याक्सवेल: उनको सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरु
8 पुस्तकहरु तपाइँको मुख मा एक राम्रो र मीठो स्वाद राख्न